Netflix waxay baraneysaa suurtagalnimada bixinta rukunka ciyaarta oo la mid ah Apple Arcade | Waxaan ka socdaa mac
In Apple Arcade uusan helin guushii ay wiilashii Cupertino rajeynayeen, maahan wax ugub ah waxaanan ka helnay hal muunad oo dheeri ah dallacaadda ay ka samaynayso Maraykanka iyada oo loo marayo shirkadda Verizon, siinta hal sano oo marin u ah barnaamijkooda ciyaaraha.
Suuqa ciyaarta fiidiyowga, hadda waxaa jira laba ikhtiyaar: midka kaliya ee Apple ay ku bixiso ciyaaro gaar ah oo aan lahayn xiriir internet ama marin looga helo cinwaannada PC-ga ee kombuyuutarrada iyo konsollooyinka iyada oo loo marayo xiriir internet oo leh aalad kasta (Stadia, GeForce Now, Xbox Game Pass).
Si kastaba ha noqotee, wararka xanta ah ee ugu dambeeyay ee la xiriira barnaamijka fiidiyowga ee fiidiyoowga ah ee Netflix ayaa soo jeedinaya inay tahay xiiseynaya raacitaanka isla dariiqa Apple, madal ku-qorid ciyaar oo la mid ah Apple Arcade. Isticmaalayaashu waa inay bixiyaan rukhsad bille ah si ay u helaan buug-yaraha aan xadidnayn ee ciyaaraha.
Ilo kala duwan ayaa sheegaya in qorshayaasha Netflix wali wey cagaaranyihiin, marka waa macquul in kuwani waxba ku dhamaadaan (hadaan xisaabta ku dareyno guusha uu Apple Arcade haysto, wax walbo tilmaamayaan).
Sida laga soo xigtay warfaafinta, Netflix se wuxuu isu keenay hawl wadeenada rugcadaaga ciyaaraha fiidiyoowga usbuucyadii la soo dhaafay sidaa darteed waxay ku biirayaan shirkadda.
In kasta oo shirkaddu mar hore ku dhiiratay ciyaaro (…) haddana waxay darsaysaa suurtagalnimada inay kobciso maal-gashigeeda qaybta. Hal ikhtiyaar oo ay shirkaddu ka wada hadashey ayaa ah inay soo bandhigaan xirmo ciyaar la mid ah tan shirkadda Apple ee khadka tooska ah looga bixiyo, Apple Arcade.
Maxay cadahay in Netflix ay tahay inay kala duwanaanta ganacsigaaga. Hadda waxaa laga heli karaa adduunka oo dhan marka laga reebo afar dal oo uusan waligiis gaari doonin: Shiinaha iyo 3 waddan oo kale oo ay diidday dowladda Mareykanku.
Netflix ma xaqiijinayo mana beeninayo warka
Sida iska cad Netflix ma doonayo inuu xaqiijiyo qorshayaashan, gaar ahaan haddii ay ku jiraan marxaladda noocan oo kale ah. Si kastaba ha noqotee, isaguna ma diidin iyaga. Markii ay weydiisatay The Independent arimahan xanta ah, shirkadu waxay ku jawaabtay inay "ku faraxsan tahay inay wax badan ka qabato madadaalada is dhexgalka ah." Haddii qorshayaasha Netflix ay aakhirka soo if baxaan, waxay noqon doontaa ugu horreyn sannadka 2022.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Netflix waxay baraneysaa suurtagalnimada bixinta rukunka ciyaarta oo la mid ah Apple Arcade
Ka faa'iideyso heshiisyadan waqtiga xaddidan ee MacX DVD-ga ah ee loogu talagalay Mac-gaaga